Phandeeyar My experience asaGraduate from Founder Institute Yangon Chapter by Sully Bholat
April 24, 2017 Aung Win Htut #accelerateMM, Entrepreneurship, Founder Institute, Founders
Graduation Night from the Founder Institute Yangon Chapter
(Zaw Gyi, English, & Unicode versions below)
ကျွန် တော် ရန် ကုန် ကို ပြန် ပြောင်း လာ ပြီး စီး ပွား ရေး တစ် ခု လုပ် မယ် လို့ ဆုံး ဖြတ် တဲ့ အ ခါ ကျွန် တော် ဘယ် က စ ပြီး တော့ ဘာ လုပ် ရ မှန်း မ သိ ခဲ့ ပါ ဘူး။ အဲ ဒီ တော့ ကျွန် တော် Business Startup events တွေ ကို စ သွား ခဲ့ ပြီး မြန် မာ ပြည် ရဲ့ စီး ပွား ရေး အ ခြေ အ နေ ကို စ လေ့ လာ ခဲ့ ပါသည်။ ပြီး တော့ ကျွန် တော် ဟာ Business Idea Competitions များ မှာ ဝင် ပြိုင် ခဲ့ ပြီး Startup Accelerator အ ချို့ ကို ဝင် ဖို့ လျောက် ထား ခဲ့ ပေ မယ့် မ အောင် မြင် ခဲ့ ပါ ဘူး။
တစ် နေ့ မှာ တော့ ကျွန် တော် Phandeeyar က ကြော် ငြာ နေ သည့် Founder Institute ဆို သည့် Program အ ကြောင်း ကို ကြား ခဲ့ ရ ပါ သည်။ သူ တို့ ရဲ့ Program ဆွေး နွေး ပွဲ တစ် ခု ကို သွား ခဲ့ ပြီး သူ တို့ က Program ထဲ ဝင် ဖို့ idea ရှိ စ ရာ မ လို ဘူး လို့ ပြော တဲ့ အ ခါ ကျွန် တော် အ ရမ်း ပျော် ရွှင် သွား ပါ သည်။ သူ တို့ ရဲ့ Program ဝင် ခွင့် ပုံ စံ က သူ တို့ ရဲ့ စာ မေး ပွဲ ဖြေ ရ ပြီး ဝင် ခွင့် လျောက် လွှာ တင် ရ မယ် ဆို တော့ November 2016 အ စ ပိုင်း မှာ ဝင် ခွင့် လျှောက် လွှာ တင် ခဲ့ ပါ သည်။ ကျွန် တော် ဟာ သူ တို့ ရဲ့ ဝင် ခွင့် စာ မေး ပွဲ ကို အောင် မြင် ခဲ့ ပြီး သူ တို့ Program စ တင် ချိန် မှာ ရွေး ချယ် ခဲ့ သော လူ ၂၄ ယောက် ထဲ မှာ ပါ ဝင် ခဲ့ ပါ သည်။ သူ တို့ ရဲ့ သင် ရိုး ညွန်း တမ်း နဲ့ ဒီ Program မှ ဘွဲ့ ရ ပြီး အောင် မြင် ဖို့ မည် မျှ ခက် သည် ဆို တာ ကို သိ သည့် အ ခါ အ လွန် စိတ် လှုပ် ရှား ခဲ့ ပါ သည်။(ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် ဒီ Program ကို တက် ရောက် သူ ၃၀% ရာ ခိုင် နှုန်း သာ ဘွဲ့ ရ အောင် မြင် ခဲ့ သည်။)ကျွန် တော် ဟာ ဒီ စိန် ခေါ် မှု များ ကို ဖြတ် ကျော် ဖို့ အ တွက် အ ကောင်း ဆုံး ကြိုး စား မည် ဟု ဆုံး ဖြတ် လိုက် ပါ သည်။
ဒီprogramကိုစတင်ချိန်တွင်ကျွန်တော့်မှာလုပ်ငန်းအတွက်Business Ideaကောင်းကောင်းမရှိခဲ့သည့်အတွက်သူ တို့ရဲ့ Idea ကိုရွေးချယ်သည့် အဆင့်ကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်မှာစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီProgramရဲ့အပတ်စဉ်လုပ်ရသောစာများသည်လည်းအလွန်ခက်ခဲပြီးအချိန်များစွာပေးခဲ့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့ဒီProgram မှ တာဝန်ရှိသူများသည်ကျွန်တော်ရဲ့Business Idea ကိုပိုမို ကောင်းအောင်အစစအရာရာကူညီခဲ့ပါသည်။
Founder Institute မှာ ကျွန် တော့ ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအရာကတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်တွင်း၌ အောင်မြင်နေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖြင့်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အပတ်စဉ်သင်တန်းချိန်များတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၃-၄ ယောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့Business Idea များကိုလာရောက်နားထောင်ပြီးအကြံဥာဏ်များပေးအပ်ခဲ့သည့်အပြင်သင်တန်း၏အပတ်စဉ် နှင့်သက်ဆိုင်သောသင်ခန်းစာများကိုသင်ကြားပေးပါသည်။
အဲဒီလိုအောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ကျွန်တော်တို့၏Business Idea များကိုအကောင်းအဆိုးဝေဖန်ပြီးလိုအပ်ချက်များကိုထောက်ပြဝေဖန်ခြင်းသည်ကျွန်တော်အတွက်အလွန်အကျိုးရှိခဲ့ပါသည်။
နောက်ပြီး သူ့တို့ရဲ့သင်ကြားမူများကိုနားထောင်ခွင့်ရရှိခြင်းသည်လည်းမြန်မာပြည် ၏လက်ရှိစီးပွားရေးဈေး ကွက် အကြောင်းကိုပိုသိမြင်ခဲ့ရပါသည်။ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော်ရဲ့Business အတွက် ဒီစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များထဲမှ သုံးယောက်ကိုကျွန်တော်အတွက်အကြံပေးအနေဖြင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ထို့အပြင်ကျန်ရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖြင့်ဒီProgramမှတဆင့်ဆက်သွယ်မူများရရှိခဲ့ပြီး သူ့တို့ဟာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Business Flexible Pass ကိုအကူအညီများ နှင့်အကြံဥာဏ်များပေးခဲ့ပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကိုစတင်တည်ထောင်ရတာဟာ တကယ့်တော့မလွယ်ကူလှပါ။ကိုယ့်မှာကူညီလမ်းပြပေးမဲ့သူမရှိလျှင်ပိုမိုခက်ခဲလှပါသည်။Founder Institute Program ဟာ အဲဒီအတတ်ပညာများကို ၃လခွဲအတွင်းအပြတ်သင်ကြားပေးပါသည်။
ဒီ၃လခွဲအချိန်ကာလသည်တခြားစီးပွားရေးProgram များထက်စာရင်တိုတောင်းလှပါသည်။Founder Institute Programကို Idea မရှိပဲနှင့်လည်းဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီးProgram မှ အောင်မြင်ဘွဲ့ရပြီးသောအခါသင့်မှာအောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှထောက်ခံအားပေးခဲ့သောIdea တခုနှင့်ထူထောင်ပြီးသောကုမ္ပဏီတခုရရှိမှာဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်အဓိကရရှိခဲ့သောသင်ခန်းစာကတော့အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဆီကတစ်ဆင့်ကြားသိရသောအသိပညာများသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိပါသည်။အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သူ့တို့သည်စီးပွားရေးကိုကျွမ်းကျင်အောင်မြင်စွာလုပ်ခဲ့သောအတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးစီးပွားရေးလောက ၏ အတက်အကျကိုကောင်းစွာသိရှိလို့ဖြစ်ပါသည်။
Founder Institute Program သည်စွန့်ဦးတီထွင်ဖြစ်ချင်သူများနှင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောတက်သင့်သောProgramတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်။
ကျွန်တော်ရဲ့ Business Idea Flexible Passကို ဒီ Founder Institute Programထဲမှာကြိမ်ဖန်များစွာပြုပြင်မွမ်းမံခွင့်ရခဲ့ပါသည်။
အခုတော့ကျွန်တော်ဟာ Flexible Pass ကိုဈေးကွက်ထဲသို့မကြာခင်ခေါ်ဆောင်လာတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ပြီးကျွန်တော်သည်ပထမဦးဆုံးFounder Institute Yangon မှ အောင်မြင်ဘွဲ့ရသောပထမဦးဆုံး(၆)ဦးအနက်မှတစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
အခုအချိန်ဟာကျွန်တော့်လုပ်ငန်းအတွက်အစပဲရှိပြီးနောက်ထပ်ခရီးရှည်ကိုဆက်လက်သွားရ ဦးမည်ဖြစ်ပြီးဒီ Founder Institute Program မှာ သင် ကြား ပြီး တက် ရောက် ခွင့် ရ တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ပြီးတော့ Founder Institute Yangon မှ Director များ ၊အကြံပေးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လူကြီးများ၊ Phandeeyar မှဝန်ထမ်းများ၊ကျွန်တော့် ရဲ့အဖွဲ့သားများ၊ကျွန်တော့် မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများ၊ကျွန်တော့်အားပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့သူများနှင့်အတူကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးများစွာတင်ပါသည်။
အခုတော့တကယ့်ကျွန်တော်လျှောက် ရ မည့် ခ ရီး ရှည် ကို စ တင် ပါ ပြီ။
“ကျွန်တော့် ၏ Business Flexible Pass အကြောင်း“
Flexible Pass သည်သင့်အားကျွန်တော်တို့ ၏Partner Gyms/Fitness Centres များတွင်ကစားနိုင်ရန်လုပ်ပေးသည့် Pass ဖြစ်ပါသည်။ Flexible Pass နှင့်သင်သည်ကျွန်တော်တို့ ၏ Partner များတွင် Gym အသုံးပြုခွင့်၊Fitness Classes များတက်ရောက်ခွင့် နှင့် ရေကူးကန် အသုံးပြုခွင့်တို့ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Flexible Pass အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါ www.flexiblepass.com website နှင့် Flexible Pass facebook page တို့ တွင် အ သေး စိတ် ဝင် ရောက် လေ့ လာ နိုင် ပါ သည်။
When I moved back to Yangon to doastartup, I have no idea what to do or where to start. I started going to some startup events to getabetter understanding of the market in Myanmar. I also competed inacouple of business idea competitions and applied for some startup accelerators but didn’t managed to get very far with them.
One day, I found out about this program called Founder Institute which Phandeeyar has been advertising. I went to one of their information events and was very delighted to see that they do not require an idea to enter the program. I haveacouple of startup ideas but they are not very solid so I don’t want to be rejected by the program because of those ideas. Their admissions process is mainly based on their Predictive Admissions Assessment and the assessment of your application so I decided to apply for the program in early November. I managed to pass their Predictive Admissions Assessment and was selected as one of the 24 people to be part of the program when it started.
I was very excited to start the program after reading about the curriculum and how tough it is to graduate from the program(Only around 30% graduate). I welcomed the challenge and decided to work hard to pass the different stages of the Founder Institute program.When I first started the program, I do not haveasolid idea forastartup so I was worried that my idea would not pass the mentor idea review stage. The weekly assignments of the program are also very challenging and takesalot of time to complete. However, they helped tremendously in validating my startup idea and helped me in refining my idea to make it better.
One of the best things about Founder Institute is the network of local mentors that they provide. Every session, 3-4 mentors would come in to give feedback to our pitches and will doapresentation that is related to the session of the topic. It is very helpful to get an honest opinion of established mentors about your business idea and what you should improve on. Also, it is very beneficial to getachance to listen to their presentations to gainadeeper understanding of the business world. I managed to get3advisors from the local network of mentors to be part of my advisory board and has great relationships with the rest of the mentors who has been helping my startup Flexible Pass in other ways as well.
Startingabusiness is hard and it is even harder if you don’t have the right guidance or know the right ways. Founder Institute teaches you all those things in 3.5 months which isapretty short time compared to other entrepreneurship programs. You can join Founder Institute without any idea and graduate it withavalidated idea that has been backed by experienced mentors andacompany that has been incorporated. I’ve learned from the program that you learn best by listening to the valuable advice given by these experienced mentors who has startedabusiness before as they know the ups and down of this entrepreneurship world very well.
I think Founder Institute is one of the best programs in the world for anyone who wants to be an entrepreneur and start their own business. You can refine your idea multiple times through feedback and you can be assured that your business idea has been validated by Founder Institute mentors as it hasagreat chance to beasuccess in the market when you graduate.
I have refined my startup idea Flexible Pass multiple times throughout my time in Founder Institute by making changes to improve it. Now, I am excited to take it to market soon and cannot wait for this entrepreneurial journey to start. I am also very happy to be one of the6graduates from the very first batch of Founder Institute Yangon Chapter.I know this is just the beginning of the journey and there isalong way to go but I am really grateful for Founder Institute for giving meachance to be part of the program. I would also like to thank all the directors of Founder Institute Yangon, the staff at Phandeeyar, the mentors,my fellow graduates, my team, my advisors, my friends and my family for all the support and help that they have given me throughout this journey. Now the real journey in the entrepreneurship world begins!
About my startup Flexible Pass
Flexible Pass isamonthly pass that customers can buy to use it asaday pass entry or for other fitness options at our partner gyms/fitness centres all across Yangon. It currently offers3fitness options: Gym usage, Fitness Classes and Swimming Pool Usage.
For more information, you can check out our website www.flexiblepass.com and our Facebook page www.facebook.com/flexiblepass
ကြှနျ တျော ရနျ ကုနျ ကို ပွနျ ပွောငျး လာ ပွီး စီး ပှား ရေး တဈ ခု လုပျ မယျ လို့ ဆုံး ဖွတျ တဲ့ အ ခါ ကြှနျ တျော ဘယျ က စ ပွီး တော့ ဘာ လုပျ ရ မှနျး မ သိ ခဲ့ ပါ ဘူး။ အဲ ဒီ တော့ ကြှနျ တျော Business Startup events တှေ ကို စ သှား ခဲ့ ပွီး မွနျ မာ ပွညျ ရဲ့ စီး ပှား ရေး အ ခွေ အ နေ ကို စ လေ့ လာ ခဲ့ ပါသညျ။ ပွီး တော့ ကြှနျ တျော ဟာ Business Idea Competitions မြား မှာ ဝငျ ပွိုငျ ခဲ့ ပွီး Startup Accelerator အ ခြို့ ကို ဝငျ ဖို့ လြောကျ ထား ခဲ့ ပေ မယျ့ မ အောငျ မွငျ ခဲ့ ပါ ဘူး။
တဈ နေ့ မှာ တော့ ကြှနျ တျော Phandeeyar က ကွျော ငွာ နေ သညျ့ Founder Institute ဆို သညျ့ Program အ ကွောငျး ကို ကွား ခဲ့ ရ ပါ သညျ။ သူ တို့ ရဲ့ Program ဆှေး နှေး ပှဲ တဈ ခု ကို သှား ခဲ့ ပွီး သူ တို့ က Program ထဲ ဝငျ ဖို့ idea ရှိ စ ရာ မ လို ဘူး လို့ ပွော တဲ့ အ ခါ ကြှနျ တျော အ ရမျး ပြျော ရှငျ သှား ပါ သညျ။ သူ တို့ ရဲ့ Program ဝငျ ခှငျ့ ပုံ စံ က သူ တို့ ရဲ့ စာ မေး ပှဲ ဖွေ ရ ပွီး ဝငျ ခှငျ့ လြောကျ လှာ တငျ ရ မယျ ဆို တော့ November 2016 အ စ ပိုငျး မှာ ဝငျ ခှငျ့ လြှောကျ လှာ တငျ ခဲ့ ပါ သညျ။ ကြှနျ တျော ဟာ သူ တို့ ရဲ့ ဝငျ ခှငျ့ စာ မေး ပှဲ ကို အောငျ မွငျ ခဲ့ ပွီး သူ တို့ Program စ တငျ ခြိနျ မှာ ရှေး ခယျြ ခဲ့ သော လူ ၂၄ ယောကျ ထဲ မှာ ပါ ဝငျ ခဲ့ ပါ သညျ။ သူ တို့ ရဲ့ သငျ ရိုး ညှနျး တမျး နဲ့ ဒီ Program မှ ဘှဲ့ ရ ပွီး အောငျ မွငျ ဖို့ မညျ မြှ ခကျ သညျ ဆို တာ ကို သိ သညျ့ အ ခါ အ လှနျ စိတျ လှုပျ ရှား ခဲ့ ပါ သညျ။(ကမ်ဘာ ပျေါ တှငျ ဒီ Program ကို တကျ ရောကျ သူ ၃၀% ရာ ခိုငျ နှုနျး သာ ဘှဲ့ ရ အောငျ မွငျ ခဲ့ သညျ။)ကြှနျ တျော ဟာ ဒီ စိနျ ချေါ မှု မြား ကို ဖွတျ ကြျော ဖို့ အ တှကျ အ ကောငျး ဆုံး ကွိုး စား မညျ ဟု ဆုံး ဖွတျ လိုကျ ပါ သညျ။
ဒီprogramကိုစတငျခြိနျတှငျကြှနျတေျာ့မှာလုပျငနျးအတှကျBusiness Ideaကောငျးကောငျးမရှိခဲ့သညျ့အတှကျသူ တို့ရဲ့ Idea ကိုရှေးခယျြသညျ့ အဆငျ့ကိုမကြျောဖွတျနိုငျမှာစိုးရိမျခဲ့ရပါတယျ။ဒီProgramရဲ့အပတျစဉျလုပျရသောစာမြားသညျလညျးအလှနျခကျခဲပွီးအခြိနျမြားစှာပေးခဲ့ရပါသညျ။ဒါပမေဲ့ဒီProgram မှ တာဝနျရှိသူမြားသညျကြှနျတျောရဲ့Business Idea ကိုပိုမို ကောငျးအောငျအစစအရာရာကူညီခဲ့ပါသညျ။
Founder Institute မှာ ကြှနျ တော့ ရဲ့ အကွိုကျဆုံးအရာကတော့ ကြှနျတျောတို့ကိုပွညျတှငျး၌ အောငျမွငျနသေောစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျမြားဖွငျ့ခြိတျဆကျပေးခွငျးဖွဈပါသညျ။
အပတျစဉျသငျတနျးခြိနျမြားတှငျစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ ၃-၄ ယောကျသညျကြှနျတျောတို့ရဲ့Business Idea မြားကိုလာရောကျနားထောငျပွီးအကွံဉာဏျမြားပေးအပျခဲ့သညျ့အပွငျသငျတနျး၏အပတျစဉျ နှငျ့သကျဆိုငျသောသငျခနျးစာမြားကိုသငျကွားပေးပါသညျ။
အဲဒီလိုအောငျမွငျသောစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျမြားက ကြှနျတျောတို့၏Business Idea မြားကိုအကောငျးအဆိုးဝဖေနျပွီးလိုအပျခကျြမြားကိုထောကျပွဝဖေနျခွငျးသညျကြှနျတျောအတှကျအလှနျအကြိုးရှိခဲ့ပါသညျ။
နောကျပွီး သူ့တို့ရဲ့သငျကွားမူမြားကိုနားထောငျခှငျ့ရရှိခွငျးသညျလညျးမွနျမာပွညျ ၏လကျရှိစီးပှားရေးဈေး ကှကျ အကွောငျးကိုပိုသိမွငျခဲ့ရပါသညျ။ကြှနျတျောဟာ ကြှနျတျောရဲ့Business အတှကျ ဒီစီးပှားရေး လုပျငနျးရှငျမြားထဲမှ သုံးယောကျကိုကြှနျတျောအတှကျအကွံပေးအနဖွေငျ့ရရှိခဲ့ပါသညျ။ထို့အပွငျကနျြရှိသောစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျမြားဖွငျ့ဒီProgramမှတဆငျ့ဆကျသှယျမူမြားရရှိခဲ့ပွီး သူ့တို့ဟာလညျးကြှနျတျောရဲ့ Business Flexible Pass ကိုအကူအညီမြား နှငျ့အကွံဉာဏျမြားပေးခဲ့ပါသညျ။
စီးပှားရေးလုပျငနျးတခုကိုစတငျတညျထောငျရတာဟာ တကယျ့တော့မလှယျကူလှပါ။ကိုယျ့မှာကူညီလမျးပွပေးမဲ့သူမရှိလြှငျပိုမိုခကျခဲလှပါသညျ။Founder Institute Program ဟာ အဲဒီအတတျပညာမြားကို ၃လခှဲအတှငျးအပွတျသငျကွားပေးပါသညျ။
ဒီ၃လခှဲအခြိနျကာလသညျတခွားစီးပှားရေးProgram မြားထကျစာရငျတိုတောငျးလှပါသညျ။Founder Institute Programကို Idea မရှိပဲနှငျ့လညျးဝငျရောကျလြှောကျထားနိုငျပွီးProgram မှ အောငျမွငျဘှဲ့ရပွီးသောအခါသငျ့မှာအောငျမွငျသောစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျမြားမှထောကျခံအားပေးခဲ့သောIdea တခုနှငျ့ထူထောငျပွီးသောကုမ်ပဏီတခုရရှိမှာဖွဈသညျ။
ကြှနျတျောအဓိကရရှိခဲ့သောသငျခနျးစာကတော့အောငျမွငျသောစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျမြားဆီကတဈဆငျ့ကွားသိရသောအသိပညာမြားသညျအလှနျတနျဖိုးရှိပါသညျ။အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျောသူ့တို့သညျစီးပှားရေးကိုကြှမျးကငျြအောငျမွငျစှာလုပျခဲ့သောအတှအေ့ကွုံမြားစှာရှိပွီးစီးပှားရေးလောက ၏ အတကျအကကြိုကောငျးစှာသိရှိလို့ဖွဈပါသညျ။
Founder Institute Program သညျစှနျ့ဦးတီထှငျဖွဈခငျြသူမြားနှငျ့ကိုယျပိုငျလုပျငနျးစတငျတညျထောငျသူမြားအတှကျအကောငျးဆုံးကမ်ဘာပျေါတှငျရှိသောတကျသငျ့သောProgramတဈခုဖွဈသညျဟုကြှနျတျောထငျပါသညျ။
ကြှနျတျောရဲ့ Business Idea Flexible Passကို ဒီ Founder Institute Programထဲမှာကွိမျဖနျမြားစှာပွုပွငျမှမျးမံခှငျ့ရခဲ့ပါသညျ။
အခုတော့ကြှနျတျောဟာ Flexible Pass ကိုဈေးကှကျထဲသို့မကွာခငျချေါဆောငျလာတော့မညျဖွဈပါသညျ။
နောကျပွီးကြှနျတျောသညျပထမဦးဆုံးFounder Institute Yangon မှ အောငျမွငျဘှဲ့ရသောပထမဦးဆုံး(၆)ဦးအနကျမှတဈဦးဖွဈသညျ့အတှကျအလှနျဂုဏျယူဝမျးမွောကျမိပါသညျ။
အခုအခြိနျဟာကြှနျတေျာ့လုပျငနျးအတှကျအစပဲရှိပွီးနောကျထပျခရီးရှညျကိုဆကျလကျသှားရ ဦးမညျဖွဈပွီးဒီ Founder Institute Program မှာ သငျ ကွား ပွီး တကျ ရောကျ ခှငျ့ ရ တဲ့အတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ။
ပွီးတော့ Founder Institute Yangon မှ Director မြား ၊အကွံပေးသောစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျလူကွီးမြား၊ Phandeeyar မှဝနျထမျးမြား၊ကြှနျတေျာ့ ရဲ့အဖှဲ့သားမြား၊ကြှနျတေျာ့ မိသားစုနှငျ့သူငယျခငျြးမြား၊ကြှနျတေျာ့အားပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့သူမြားနှငျ့အတူကြေးဇူးတငျထိုကျသူမြားအားလုံးကိုကြေးဇူးမြားစှာတငျပါသညျ။
အခုတော့တကယျ့ကြှနျတျောလြှောကျ ရ မညျ့ ခ ရီး ရှညျ ကို စ တငျ ပါ ပွီ။
“ကြှနျတေျာ့ ၏ Business Flexible Pass အကွောငျး”
Flexible Pass သညျသငျ့အားကြှနျတျောတို့ ၏Partner Gyms/Fitness Centres မြားတှငျကစားနိုငျရနျလုပျပေးသညျ့ Pass ဖွဈပါသညျ။ Flexible Pass နှငျ့သငျသညျကြှနျတျော
တို့ ၏ Partner မြားတှငျ Gym အသုံးပွုခှငျ့၊Fitness Classes မြားတကျရောကျခှငျ့ နှငျ့ ရကေူးကနျ အသုံးပွုခှငျ့တို့ရရှိမညျဖွဈပါသညျ။
Flexible Pass အကွောငျးပိုမိုသိရှိလိုပါ www.flexiblepass.com website နှငျ့ Flexible Pass facebook page တို့ တှငျ အ သေး စိတျ ဝငျ ရောကျ လေ့ လာ နိုငျ ပါ သညျ။